प्रचण्डले महासचिवमा जनार्दन रोजे ! अन्य पदमा को–को ? - केन्द्र खबर
प्रचण्डले महासचिवमा जनार्दन रोजे ! अन्य पदमा को–को ?
२०७८ पुस १२ १६:३८
महाधिवेशन सुरु हुनु अघिल्लो दिन अवेर राति सम्पन्न स्थायी कमिटी र महाधिवेशन सुरु हुने दिन विहान बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीलाई बहुपदीय प्रणालीमा लगिएको छ।
जसअनुसार अध्यक्ष, १ वरिष्ठसहित ७ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, २ उपमहासचिव, ३ सचिव र १ कोषाध्यक्षको प्रावधान गरेको छ। अध्यक्षमा दाहालको विकल्प नभएको नेताहरुले नै सार्वजनिक रुपमा बताईसकेका छन् । तर, अध्यक्षपछिको शक्तिशाली पद महासचिवमा भने तीन जनाको दाबी रहेको बुझिएको छ। नेताहरु जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन र पम्फा भुषाल ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षमा भने नारायणकाजी श्रेष्ठ चयन हुने बताईएको छ । ६ उपाध्यक्षमा भने कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, पम्फा भुसाल, मात्रिका यादव, गिरिराजमणि पोखरेल, देव गुरूङ, हरिबोल गजुरेलको नाम चर्चामा छ ।